Factory Factory, mpamatsy - mpanamboatra kojakoja fampiasa any Chine
Fametahana fampiatoana azo ovaina
Amin'ny maha iray amin'ireo mpifaninana mpifaninana indrindra amin'ny orinasa, ny fonontenanay mihantona azo ovaina dia natao miaraka amina endriny roa ampifanarahana amin'ny soldering fanokafana. Ary nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao izy ireo, indrindra any Amerika Avaratra.
Amin'ny maha-iray amin'ireo mpifaninana mpifaninana indrindra amin'ny orinasa, ny mpiambina ny vavahady dia nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao, indrindra any Amerika Avaratra. Ary koa, izy ireo dia takelaka vy 16 mifangaro vy.
Takelaka Bocaoma vita amin'ny vy 16
Amin'ny maha-iray amin'ireo mpifaninana mpifaninana indrindra an'ny orinasa anay, ny takelaka Boca anay dia nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao, indrindra tany Amerika Avaratra.
Clamp fanamboarana pipa zinc miloko amin'ny Pipe Polyethylene
Amin'ny maha-iray amin'ireo mpifaninana mihantona indrindra an'ny orinasa anay dia nahazo laza malaza erak'izao tontolo izao ny clamp fanamboarana anay, indrindra any Amerika Avaratra. Ary izy ireo dia nopetahany takelaka vy mora volavolaina amin'ny lasitra vita amin'ny fingotra.